साडी कसरी लगाउने भनेर दोधारमा हुनुहुन्छ ? हेरौँ २ मिनेटमै साडी लगाउने सजिलो तरिका (भिडियो सहित्) – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजनसाडी कसरी लगाउने भनेर दोधारमा हुनुहुन्छ ? हेरौँ २ मिनेटमै साडी लगाउने सजिलो तरिका (भिडियो सहित्)
December 16, 2020 admin मनोरंजन 3329
सारी लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा-चाडपर्वमा महिलाहरू सारी लगाउन रुचाउँछन्। सारी सही तरिकाले लगाइएन भने सारीमा राम्रोको साटो नराम्रो देखिन सक्छ। सारीमा राम्री देखिन त्यसलाई लगाउने तरिका थाहा हुनुपर्छ।कोही–कोही सारीसँग धेरै गरगहना लगाउन मन पराउँछन्। सारीसँग गहना सुहाउँछ भन्ने धेरैलाई लाग्छ। तर, हरेक सारीसँग गहना सुहाउँदैन। सारी नै हेभी डिजाइन र इम्ब्रोइडरी गरिएको छ भने त्यससँग हेभी गरगहना सुहाउँदैन। यस्तो सारीसँग हलुका गहना लगाउनुपर्छ।–हिल जुत्तामा सजिलो महसुस नगर्ने वा लगाउन नचाहनेले सारी नलगाएकै बेस। सारीसँग हिल जुत्ता नै राम्रो देखिन्छ। सादा फ्ल्याट जुत्ता सारीमा सुहाउँदैन।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
सारीसँग सबै कुरा म्याचिङ हुनुपर्छ भन्ने सोच बदल्नुपर्छ। कन्ट्रास्ट गरेर लगाएको राम्रो देखिन्छ। सारी र ब्लाउज एउटै रङको छ भने चुरा र टीका फरक रङको लगाउनुपर्छ। यसो गर्दा स्टाइलिस देखिन सकिन्छ।–सारी कम्मरमा बाँध्नुपर्छ। कम्मरभन्दा धेरै माथि बाँधेको सारी राम्रो देखिँदैन।साना नानीबाबु छन् र उनीहरूको सामान बोक्नुपर्छ भने ठूलो ब्यागको साटो पातलो चेन भएको ब्याग वा क्लच बोक्नुपर्छ। ठूलो ब्यागले लुक खराब देखिन सक्छ।–सारीको रङअनुसार मेकअप गर्नुपर्छ। सारीको रङ गाढा छ भने हलुका मेकअप गर्नुपर्छ। हलुका रङको सारी छ भने गाढा मेकअप गर्नुपर्छ।–ब्लाउज शरीरको संरचनाअनुसार बनाउनुपर्छ। एकदमै टाइट वा खुकुलो लगाउनु हुँदैन।साडी कसरी लगाउने भनेर दोधारमा हुनुहुन्छ ? हेरौँ २ मिनेटमै साडी लगाउने सजिलो उपाय ।साडी लगाउन जान्नेलाई लगाउन सजिलो हुन्छ भने नजान्नेलाई निकै नै कठिन हुन्छ । हेरौँ साडी लगाउने सजिलो तरिका ।
सुत्नु भन्दा पहिले एक पटक पढ्नुस आनन्द आउने छ… त्यो दुइ रात
December 18, 2020 admin मनोरंजन 5733
१६ बर्षकि राउटे सुन्दरीसँग ३२ बर्षका राउटे युवाको बिबाह: राउटेहरुको दुनिया चकित बनाउने सुहागरात (भिडियो हेर्नुहोस)
January 28, 2021 admin मनोरंजन 3489
काठमाडौं । सहरका युवायुवतीहरू विभिन्न पार्क तथा मन्दिरहरूमा भेट नै गफगाफमा समय बिताउँछन्, तर जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे युवायुवती कसरी रमाइलो गर्छन् होला ? यो जिज्ञासा मेट्न दुई वर्षसम्म विभिन्न समयमा फिरन्ते राउटेसँग
November 22, 2020 admin मनोरंजन 13925
LEX 18 agenda conversation: Job club (403586)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (378227)
Hello world! (313864)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (288648)
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (104853)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (104747)